လူမှုရေးအပလီကေးရှင်းတွေပေါ်မှာ အချိန်နဲ့ငွေကြေးတွေ အလွယ်ဆုံးရှုံးနေပြီလား? • POINT
လူမှုရေးအပလီကေးရှင်းတွေအပေါ်မှာ အချိန်နဲ့ငွေကုန်ဆုံးမှုက ထိတ်လန့်စရာကောင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေက မိုဘိုင်းဂိမ်းတွေကစားရင်းနဲ့ တစ်လချင်းစီကို နာရီပေါင်းသန်းတစ်ထောင်ကျော် ကုန်ဆုံးနေကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ဖုန်းထဲက လူမှုကွန်ရက်မှာသုံးစွဲတဲ့အချိန်ပြီးရင် ဂိမ်းက ဒုတိယလိုက်ပါတယ်။
ပျှမ်းမျှဆိုရင် တစ်ရက်ကို လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ အပလီကေးရှင်းတွေသုံးရင်း တစ်နေ့ကို နှစ်နာရီ အချိန်ကုန်ဆုံး တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ဘဝလုံးဆိုရင် ငါးနှစ်နဲ့လေးလကြာပါတယ်။
အဲ့အချိန်လောက်ဆိုရင် မင်းက လနဲ့ကမ္ဘာကို ၃၂ ကြိမ်လောက် သွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ အချိန်လေးပဲ မဟုတ်ပါဘူး။
လူမှုရေးအပလီကေးရှင်းတွေက နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆီကနေ ဒေါ်လာသန်းချီပြီးတော့ ရနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အများစုက အပလီကေးရှင်းတွေ အပေါ်မှာ တစ်ဒေါ်လာ နှစ်ဒေါ်လာလောက် ကုန်ဆုံးရတာကို စိတ်ထဲမထားကြပါဘူး။
ဥပမာပြောရရင် ထိပ်ဆုံးမှာရောက်နေတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pokemon Go က တစ်နေ့ကို ဒေါ်လာ၂.၃သန်း ဝင်ငွေရပါတယ်။
အခုတော့ အပလီကေးရှင်းတွေ အပေါ်မှာ မင်းကုန်ဆုံးနေတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းနည်း စိုးရိမ်နေ လောက်ပါပြီ။ ဘာကြောင့်ဒါဖြစ်ရတာလဲဆိုတာနဲ့ ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ဖို့ အကြံကောင်းတစ်ခု ပေးပါရစေ။
ကျွန်တော်တို့က မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအပေါ်မှာ အချိန်တွေကုန်ဆုံးတာများကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းပျင်းလွယ်ပြီး ဖုန်းကလဲ အသုံးဝင်တယ်လေ။
ပျင်းရိခြင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကို ပျော်အောင် လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဘာတွေပဲ ဖြစ်နေပါစေ ဒါကိုရှင်းပစ်ချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဖုန်းသုံးတာက ကျွန်တော်တို့ဒါကို ရှင်းပစ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းက ကျွန်တော်တို့ကို အပျင်းပြေစေပါတယ်။ ဖုန်းစခရင်ကို ထိုင်ပွတ်နေတာက စိတ်တွေထုံထိုင်းသွားစေပေမယ့် ဘာမှမလုပ်ပဲနေတာထက်တော့ ပိုကောင်းနေသေးတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ ဒါကိုမရပ်တန့်နိုင်ပါဘူး။
လူမှုကွန်ရက်အပလီကေးရှင်းတွေက အရမ်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကျွန်တော်တို့ ပျင်းတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေးနိုင်တယ်လေ။ အရာအားလုံးထက် အနီးအနားမှာ ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေက အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ကို လော့ဖြည်လိုက်ဖို့က အချိန်တစ်စက္ကန့်လေးပဲ ကြာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖုန်းသုံးတာက တကယ်တော့ အပျင်းမပြေပါဘူး။
Temple တက္ကသိုလ်ကသုတေသနတစ်ခုမှာ ဖုန်းသုံးတာက စိတ်ရှည်သည်းခံမှုတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတွေကို သုံးလေလေ ကျွန်တော်တို့ ပိုပျင်းလေလေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တတ်လာကြတယ်။ ဖုန်းမသုံးဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မနေနိုင်ဖြစ်လာကြတယ်။
မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတွေကို ပိုသုံးလေလေ ဒါတွေကို မသုံးပဲ မနေနိုင်လေလေ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ အပျင်းမပြေနိုင်တော့ပါဘူး။
ပျင်းတဲ့အခါ ဖုန်းဆီကို လက်လှမ်းလိုက်တာက ပုံမှန်ဖြစ်နေပေမယ့် ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်ကို ရှောင်ရှားဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အချိန်တွေကို ဘယ်လိုကုန်ဆုံးနေလဲဆိုတာကို အာရုံစိုက်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
အပိုင်း(၂)ဆက်ရန် . . . လူမှုကွန်ရက် အလွန်အကျွံစွဲလန်းမှုကနေ ရပ်တန့်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
အောင်မြင်ဖို့ ငြင်းပယ်တတ်အောင်လည်း သင်ယူပါ